Posted: August 2, 2010 in कविता कुण्ड
जती खाएपनि नअघाइने यो चिज कस्तो हो ?
कसैको दिलै खोलेर तारिफ गर्दा नि कर्के नजर लाइयो
अमित (अत्मेय)जी टाइटल अनुसार सुरुवात मज्जा ले नै गर्नु भएको रहेछ अनि त्यहि टाइटलको धार बाहिर गएको जस्तो लाग्छ अन्त्य चाही !
लेख्न चाही अलिक व्यंग्यात्मक खोज्नु भएको रहेछ – तर मलाइ त खै के नभए जस्तो पो लाग्यो !
लेख्न खोज्दा कि त लयात्मकता पकड़नुस हैन भने लयलाइ छाडेर सरर बहेको तालमा लेख्ने कोसिस गरे राम्रो होला ! यो दुवै लाइ मिलाउन लाग्दा अलिक खल्लो हुन्छ प्रस्तुती !
“प्रशंसा” गर्नै मन नलाग्ने भो…..
सबै उस्तै, संसाबरै यस्तै !
चाकडी र प्रशंसाप्रति समर्पित नै भए जस्तो छ सारा जगत् । यसको सेरोफेरोमा व्यङ्ग्य राम्ररी बगाउनुभएको छ अमित जी । अन्तिमको दुई लाइन भने जताबाट फर्काएर बुझ्दा पनि हुने देखिन्छ है ।
राम्रो र प्रशंसायोग्य नै कविता छ ।
तर सुरुका चार लाईनमा र अन्ततिरका हरफहरुमा भएको उचाइ बीचका केही लाईनमा अलिकता फिक्का भएको छ ।
दोस्रो प्याराको छ लाइनलाई कि ८ कि ४ मै सिमित गरेको भए समान धार रहन्थ्यो कि जस्तो लाग्दैछ ।
काव्यमा आफू कमजोर नै भएपनि मनमा लागेको कुरा भने लेखेँ है ।
भन्न हुने हो किन हैन् तर पनि भन्छु है । मेरो अवस्था संग झन्डै ………..